Ifektri yochungechunge lwamapayipi wamandla - Abakhiqizi baseChina abanamandla, abahlinzeki
I-HFB single wall power bellows
Ukufakwa kokumelana nokushisa, kuphephile futhi kunokwethenjelwa: Izinto eziyinhloko zepayipi ziguqulwa nge-polypropylene, enezinto ezinhle zokuvikela futhi ezingakwazi ukumelana nokucindezela kwangaphandle emazingeni okushisa aphezulu. Ifanele njengomkhono ovikelayo wezintambo zamandla kagesi aphezulu. Ukumelana nokucindezela nokucindezela, okuqinile nokuguquguqukayo: Kunokumelana okuqinile, ukuqina kwengcindezi yangaphandle nokuguquguquka okungcono. Ukuxhumeka kuvaliwe ngocingo, okulula ...
I-IFB ifaka kabili amandla odonga
I-IFB yangaphakathi-odongeni yamandla omoya, eyaziwa nangokuthi i-CM composite eqiniswe ngamandla odonga kabili, ine-design yesakhiwo senoveli, isakhiwo esihlukile, ukumelana okungqubuzana okuphansi, ukuguquguquka okuhle, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuqina kwendandatho ephezulu, futhi akulula ukugqashula futhi ubudala. Udonga lwangaphandle luyindandatho engenalutho, lusebenzisa ngokugcwele isimiso se-I-steel sokwenza ngcono i-inertia engunxande yengxenye yesiphambano, futhi udonga lwangaphakathi lubushelelezi kakhulu, okuthuthukisa ukusebenza kahle kwe-threadin ...
Ijaji lekhebula lamandla kagesi e-MPP
Izici Product 1, Yiba omuhle kakhulu kagesi ukwahlukanisa ukusebenza. 2, Yiba nokushisa okuphezulu kokuhlanekezela kokushisa nokusebenza okushisayo kokushisa okuphansi, ukushisa kokusebenzisa isikhathi eside -5 ℃ -95 ℃. 3, High ezishisayo amandla compressive ucezu indandatho, ukusebenza high compressive, eqinile ukugqwala ukumelana. 4, Isisindo esincane, kulula ukufaka ngokuxhuma okushisayo. 5, Impilo ende yokusebenza kwepayipi, impilo yenkonzo ephephile engaphezulu kweminyaka engama-60. 6, Ingabuye isetshenziswe futhi isetshenziswe futhi, futhi ngeke ingcolise indawo ...
Izinto ezibonakalayo Amapayipi wamandla we-CPVC asebenzisa i-resin ye-PVC-C njengezinto eziyinhloko zokumelana nokushisa nezakhiwo ezinhle kakhulu zokufakwa. Imikhiqizo ye-CPVC okwamanje yamukelwa njengemikhiqizo yokuvikela imvelo eluhlaza. Izakhiwo zabo ezinhle kakhulu zomzimba nezamakhemikhali zithola ukunakekelwa okwandayo okuvela embonini. Amapayipi kagesi e-CPVC anamapayipi aqinile aqinile aqinile anezindonga ezibushelelezi zangaphakathi nezangaphandle, umbala obomvu osawolintshi, imibala ekhanyayo nebamba amehlo. Amapayipi kagesi wokumelana nokushisa anama-15 ...